कम्प्युटरमा धेरै बस्नेलाई रिँगटा – Health Post Nepal
२०७५ भदौ ७ गते १४:२९
म ५ फिट १० इन्च अग्लो छु, मेरो तौल ९५ केजी छ । उमेर ३४ वर्ष भएँ, पछिल्ला दिनमा टाउको दुख्छ, रिँगटा लाग्छ र बारम्बार पिसाब फेर्न मन लागिरहने समस्याले पीडित छु । किन यस्तो भएको होला ?
डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल वरिष्ठ न्युरोफिजिसियन, त्रिवि शिक्षण अस्पताल
तपाईंको उमेर र उचाइको अनुपातमा तपाईंको तौल झन्डै २० केजी बढी छ । मोटोपन नसर्ने रोगको घर हो । तपाईंका लक्षणहरू सुन्दा तपाईंले तत्कालै अन्य शारीरिक परीक्षणहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर पानी बढी पिएर हो वा नपिईकनै बढी पिसाब जानुपरेको हो । पानी नपिईकनै बढी पिसाब जानुपर्छ, थोरैथोरै हुन्छ र ननिख्रिएजस्तो हुन्छ भने त्यो मधुमेह वा अन्य मिर्गौलासम्बन्धी समस्याले पनि हुन सक्छ ।
तपाईंको रक्तचाप, कोलेस्टेरोलदेखि मिर्गौलाको अवस्था थाहा पाउने गरी चिकित्सकको सल्लाहमा सबै जाँच गराउनुपर्छ । जहाँसम्म रिँगटा लाग्ने कुरा छ, त्यो उच्च रक्तचापसँग सम्बन्धित हुन सक्छ । कम्प्युटरमा बसिरहने मानिसमा घाँटीका हाड खिइएको अवस्थामा पनि रिँगटा लाग्न सक्छ ।
तपाईंका सम्पूर्ण लक्षण सुन्दा पिसाबसम्बन्धी समस्या नभए, यस्तो लक्षण ब्रेनमा हुने एकप्रकारको खराबीले पनि हुन सक्छ । तपाईंमा देखिएका लक्षण ब्रेनभित्रको हर्मोन ग्रान्थिमा समस्या आउँदा हुने लक्षणसँग केही मेल खान्छन् । कसैलाई एसिएलर्जीले पनि समस्या निम्त्याउँछ । एकपटक राम्रोसँग परीक्षण गराएपछि कारण पत्ता लाग्छ ।
तपाईंका पनि कुनै स्वास्थ्य समस्या छन् र चिकित्सकसँग परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने– [email protected] मा पठाउनुहोला ।